Tsinjo : Betroka
Nihaino ny fangatahan’ny mponina ny teto amin’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana ka nidina, nijery ny zava-misy marina. Teny an-tsena sy teo amin’ireo mpivarotra mpamongady ny CICA niaraka tamin’ireo mpitandro filaminana sy ny avy ao amin’ny Distrikan’ny Betroka mba hijery sy hanara-maso ny vidin’entana ilain’ny mpanjifa isan’andro. Hita fa tsy dia nisy loatra ny fiakaran’ny vidin’entana amin’ny akapobeny satria :
– Vary nafarana : 500 Ar
– Vary gasy : 600 Ar / kpk eny amin’ny mpivarotra madinika. Manao izay hifehezana io vidin’ny vary gasy io tsy hihoatra ny 550 Ar ny Minisitera ankehitriny ka hisy ny fivoriana iarahan’ny CICA sy ny avy amin’ny distrika amin’ireo mpanangom-bokatra.
– Siramamy : 2600-2700 Ar / kg
– Lafarinina : 2300-2340 Ar / kg
– Menaka : 4500 Ar / l
Tsinjo : Antananarivo sy ny manodidina
Tsinjo : Hamatsy ireo mpivarotra madinika ny MICA
Jour entier FIM andiany faha 15
FIM andiany faha 15
Ny enim-bolana voalohany amin’ity taona ity dia fotoana ahitana hetsika ara-toe-karena sy ara-barotra maro samihafa. Fotoana izay hanehoana ny finiavana hiarahana miasa ho fanatsarana ny tontolo manodidina ny fandraharahana. « Je … Read More